Guddiga Warfaafinta Golaha Shacabka oo ku baaqay sii daynta Wariye ku xiran Muqdisho – Kalfadhi
Guddiga Warfaafinta Golaha Shacabka oo ku baaqay sii daynta Wariye ku xiran Muqdisho
November 27, 2018 November 27, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha Guddiga Warfaafinta Golaha Shacabka xildhibaan Khaalid Macow Cabdulqaadir ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya in ay ka shaqayso sidii uu xuriyaddiisa dib ugu heli lahaa wariye Nuur Ismaaciil Shiikh oo in ka badan toddobaad u xiran dowladda Soomaaliya.
Xildhibaanku waxa uu yiri xilli uu la hadlayay warbaahinta Kalfadhi “sharciga waa loo siman yahay waxaan u sheegayaa dowladda in si sharci darro ah aan loo xiri karin wariyaha, haddii ay taasi dhacdana waa qalad markastana waan cambaaraynaynaa, waxa ay ahayd in maxkamadda looga yeero haddii uu qalad qalay halka layska soo xirtay.”
Guddoomiyaha Guddiga Warfaafinta ee Golaha Shacabka xildhibaan Khaalid Macow mar uu ka hadlayay madax bannaanida saxaafadda waxa uu yiri “Saxaafaddu waa madax bannaantahay, waxaana dhigaya qodobka 18-aad ee Dastuurka Soomaaliya, kaas oo dhahaya qofku waxa uu xor u yahay in uu cabbiri karo fikir-kiisa, isaga oo ku gudbinayaa cod, qoraal iyo muuqaal sida uu doono waana xorriyad uu siinayo Dastuurka Soomaaliya ayuu yiri xildhibaan Khaalid Macow”.
Xildhibaan Khaalid Macow waxa uu ka hadlay waajibka saaran saxafiga waxa uuna yiri ” Saxafiga Soomaaliyeed waa in uu gutaa shaqadiisa si ku dhisan Dastuurka dalka iyo sharciga saxaafadda ee Baarlamaanka Soomaaliya meel mariyay, haddii uu baal marana waa in lagula xisaabtamaa ayadoo loo marayo si waafaq san shuruucda dalka.” Waxa uu intaas raaciyay in dal aan lahayn saxaafad fiican aysan ka jirin caddaalad iyo horumar sidaa darteedna loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarinta saxaafadda Soomaaliya.
Aragti: Run u Sheegidda Dadkaaga